သရဲနီ ကစားသမားတွေကို ယူနိုက်တက် DNA တစ်ဖန်ပြန်လည် အသက်သွင်းနိုင်ဖို့ အားကစားစိတ်ပညာရှင်ကို နည်းပြအဖွဲ့ထဲ ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ နည်းပြသစ် Ralf Rangnick - Myanmar Globe
သရဲနီ ကစားသမားတွေကို ယူနိုက်တက် DNA တစ်ဖန်ပြန်လည် အသက်သွင်းနိုင်ဖို့ အားကစားစိတ်ပညာရှင်ကို နည်းပြအဖွဲ့ထဲ ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ နည်းပြသစ် Ralf Rangnick
ယူနိုက်တက်နည်းပြသစ် Ralf Rangnickကတော့ သူ့ရဲ့ ကစားသမားတွေကို ယူနိုက်တက် DNA တစ်ဖန်ပြန်လည် အသက်သွင်းနိုင်ဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့ဘောလုံး ideology တွေကို ‌ရိုက်သွင်းနိုင်ဖို့ အားကစားစိတ်ပညာရှင်ကို နည်းပြအဖွဲ့ထဲ ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ နည်းပြသစ်Rangnickက သူ့ရဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေကို စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး အားကစားစိတ်ပညာရှင် Sascha Lenseကို ၎င်း၏အသင်းတွင် ခန့်အပ်ရန် စီစဉ်လိုက်ပါပြီ။
အသက် 46 နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ် အားကစားစိတ်ပညာရှင် Sascha Lenseသည်ယခုသီတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းတွင် Carrington တွင်အလုပ်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး သူ၏ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့် တနင်္လာနေ့တွင်ကစားသမားများနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အားကစားစိတ်ပညာရှင် Sascha Lenseသည် ယူနိုက်တက်ဆေးအဖွဲ့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် မဟုတ်ဘဲ နည်းပြသစ်Rangnickရဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
အားကစားစိတ်ပညာရှင် Sascha Lenseသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှင့် 2000 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် Bundesliga2တွင် ပွဲပေါင်း 100 ခန့်ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး ကစားသမားဘဝကို မထင်မရှား ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ RB Leipzig တွင် Rangnick ၏လက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုအချို့ ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ အားကစားစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် သူ၏ပထမဆုံးထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှာ 2014 ခုနှစ်တွင် Dynamo Dresdenကလပ်အသင်း နှင့်ဖြစ်ပြီး 2015/16 ရာသီအစမှ RB Leipzig တွင်အလုပ်လုပ်ရန် Rangnic မှခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရသည်။
Lense သည် RB Leipzig တွင် သုံးနှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး မကြာသေးမီက Schalke တွင် အလားတူရာထူးဖြင့် အလုပ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ယခုအချိန်မှာတော့ အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့် ယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရေး အစီအစဉ်မှာ အဖုအထစ်မရှိဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သူဟာ ယူနိုက်တက်နည်းပြသစ် Ralf Rangnick လက်ထက်မှာ ဒုတိယမြောက်ရောက်ရှိလာတဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးရောက်လာတာကတော့ လက်ထောက်နည်းပြ Chris Armas ဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်ကလက်ထောက်နည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ အသက် 49 နှစ်အရွယ် အမေရိကန်သား Chris Armas သည် ဇူလိုင်လတွင် မေဂျာလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၌ Toronto FC ၏ နည်းပြချုပ်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူသည် New York Red Bulls တွင် ခြောက်နှစ်ကြာ နည်းပြလုပ်ခဲ့သောကြောင့် Rangnic နှင့်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံရေးရှိပြီး Rangnic ရဲ့ဘောလုံးဒဿနများကို ကောင်းစွာကျေညက်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပေသည်။ နည်းပြဘဝမှာ အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပေမယ့် Rangnic ရဲ့ဘောလုံးဒဿနတွေ အတွေးအခေါ်တွေ လိုချင်တဲ့ ကစားပုံတွေကို ကစားသမားတွေဆီ တိုက်ရိုက်သင်ကြားပေးရာမှာတော့ တခြားသူတွေထက်များစွာ အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ နည်းပြသစ်Rangnickက နည်းပြအဖွဲဝင်သစ်များ ခန့်အပ်ဖို့ရှိမရှိနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ” ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လာမယ့် တစ်ပတ် နှစ်ပတ်အတွင်း ကလပ်အသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်မယ့် နည်းပြအဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက် ခေါ်ယူခန့်အပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Brexit စည်းမျဉ်းများကြောင့် လွယ်ကူမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး” ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတော်တော်များများက ရုပ်သံတင်ဆငသူတွေ ဒါမှမဟုတ် လက်ထောက်နည်းပြတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကလပ်အသင်းကြီးတွေနဲ့ နှစ်ရှည်စာချုပ်တွေ ချုပ်ဆိုထားတာကြောင့် အခုအချိန်မှာ မရရှိနိုင်တော့တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မှန်ကန်တဲ့လူတွေကို နည်းနည်း မြန်မြန်နဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက် မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ရပါမယ်” လို့ ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့က ပြောကြားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ…။
နည်းပြသစ် Ralf Rangnick နဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေက အဘက်ဘက်က လဲပြိုနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ကို ဘယ်အ‌ခြေအနေထိ ဆွဲတင်ပေးနိုင်မလဲ..? ဖာဂီတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်တစ်ခေတ်ကိုရော ပြန်လည်ဆန်းသစ်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ ရင်ခုန်စွာ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ GG Man United ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….
သရဲနီ ကစားသမားတှကေို ယူနိုကျတကျ DNA တဈဖနျပွနျလညျ အသကျသှငျးနိုငျဖို့ အားကစားစိတျပညာရှငျကို နညျးပွအဖှဲ့ထဲ ခနျ့အပျလိုကျတဲ့ နညျးပွသဈ Ralf Rangnick
ယူနိုကျတကျနညျးပွသဈ Ralf Rangnickကတော့ သူ့ရဲ့ ကစားသမားတှကေို ယူနိုကျတကျ DNA တဈဖနျပွနျလညျ အသကျသှငျးနိုငျဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့ဘောလုံး ideology တှကေို ‌ရိုကျသှငျးနိုငျဖို့ အားကစားစိတျပညာရှငျကို နညျးပွအဖှဲ့ထဲ ခနျ့အပျလိုကျပါတယျ။ နညျးပွသဈRangnickက သူ့ရဲ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျတှကေို စိတျကွိုကျဖှဲ့စညျးဖို့ ပွငျဆငျနပွေီး အားကစားစိတျပညာရှငျ Sascha Lenseကို ၎င်းငျး၏အသငျးတှငျ ခနျ့အပျရနျ စီစဉျလိုကျပါပွီ။
အသကျ 46 နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈ အားကစားစိတျပညာရှငျ Sascha Lenseသညျယခုသီတငျးပတျနှောငျးပိုငျးတှငျ Carrington တှငျအလုပျစတငျမညျဖွဈပွီး သူ၏ဗီဇာလုပျငနျးစဉျပွီးဆုံးသညျနှငျ့ တနင်ျလာနတှေ့ငျကစားသမားမြားနှငျ့ပထမဆုံးအကွိမျတှဆေုံ့ခဲ့သညျ။ အားကစားစိတျပညာရှငျ Sascha Lenseသညျ ယူနိုကျတကျဆေးအဖှဲ့မှာ တာဝနျထမျးဆောငျမညျ မဟုတျဘဲ နညျးပွသဈRangnickရဲ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျထဲမှာ တာဝနျထမျးဆောငျမညျဖွဈသညျ။
အားကစားစိတျပညာရှငျ Sascha Lenseသညျ ၁၉၉၀ ပွညျ့လှနျနှဈမြားနှငျ့ 2000 ခုနှဈမြားအစောပိုငျးတှငျ Bundesliga2တှငျ ပှဲပေါငျး 100 ခနျ့ပါဝငျကစားခဲ့ပွီး ကစားသမားဘဝကို မထငျမရှား ဖွတျသနျးခဲ့ရသညျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ RB Leipzig တှငျ Rangnick ၏လကျအောကျတှငျအလုပျလုပျခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုအခြို့ ရယူနိုငျခဲ့သညျ။ အားကစားစိတျပညာရှငျတဈဦးအဖွဈ သူ၏ပထမဆုံးထငျရှားသောအခနျးကဏ်ဍမှာ 2014 ခုနှဈတှငျ Dynamo Dresdenကလပျအသငျး နှငျ့ဖွဈပွီး 2015/16 ရာသီအစမှ RB Leipzig တှငျအလုပျလုပျရနျ Rangnic မှချေါယူခွငျးခံခဲ့ရသညျ။
Lense သညျ RB Leipzig တှငျ သုံးနှဈကွာနထေိုငျခဲ့ပွီး မကွာသေးမီက Schalke တှငျ အလားတူရာထူးဖွငျ့ အလုပျခနျ့အပျခံခဲ့ရသညျ။ ယခုအခြိနျမှာတော့ အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနတောကွောငျ့ ယူနိုကျတကျသို့ ပွောငျးရှရေ့ေး အစီအစဉျမှာ အဖုအထဈမရှိဘဲ မွနျမွနျဆနျဆနျ ပွီးဆုံးခဲ့သညျ။ သူဟာ ယူနိုကျတကျနညျးပွသဈ Ralf Rangnick လကျထကျမှာ ဒုတိယမွောကျရောကျရှိလာတဲ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျဖွဈပွီး ပထမဆုံးရောကျလာတာကတော့ လကျထောကျနညျးပွ Chris Armas ဖွဈသညျ။
ယူနိုကျတကျကလကျထောကျနညျးပွအဖွဈခနျ့အပျလိုကျတဲ့ အသကျ 49 နှဈအရှယျ အမရေိကနျသား Chris Armas သညျ ဇူလိုငျလတှငျ မဂြောလိဂျဘောလုံးပွိုငျပှဲ၌ Toronto FC ၏ နညျးပွခြုပျအဖွဈမှ ထုတျပယျခံခဲ့ရပွီး အလုပျလကျမဲ့ဖွဈခဲ့ရသညျ။ သူသညျ New York Red Bulls တှငျ ခွောကျနှဈကွာ နညျးပွလုပျခဲ့သောကွောငျ့ Rangnic နှငျ့ရငျးနှီးသညျ့ ဆကျဆံရေးရှိပွီး Rangnic ရဲ့ဘောလုံးဒဿနမြားကို ကောငျးစှာကညြေကျမညျဟု မြှျောလငျ့ရပသေညျ။ နညျးပွဘဝမှာ အောငျမွငျမှု မရခဲ့ပမေယျ့ Rangnic ရဲ့ဘောလုံးဒဿနတှေ အတှေးအချေါတှေ လိုခငျြတဲ့ ကစားပုံတှကေို ကစားသမားတှဆေီ တိုကျရိုကျသငျကွားပေးရာမှာတော့ တခွားသူတှထေကျမြားစှာ အထောကျအကူပွုလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
ပွီးခဲ့သညျ့သောကွာနကေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ နညျးပွသဈRangnickက နညျးပွအဖှဲဝငျသဈမြား ခနျ့အပျဖို့ရှိမရှိနဲ့ ပတျသတျပွီး ” ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ လာမယျ့ တဈပတျ နှဈပတျအတှငျး ကလပျအသငျးနဲ့ ပူးပေါငျးနိုငျမယျ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျ တဈယောကျနှဈယောကျလောကျ ချေါယူခနျ့အပျသှားဖို့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Brexit စညျးမဉျြးမြားကွောငျ့ လှယျကူမှာတော့ မဟုတျပါဘူး” ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတေျာ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျဟောငျးတျောတျောမြားမြားက ရုပျသံတငျဆငသူတှေ ဒါမှမဟုတျ လကျထောကျနညျးပွတှပေဲဖွဈဖွဈ ကလပျအသငျးကွီးတှနေဲ့ နှဈရှညျစာခြုပျတှေ ခြုပျဆိုထားတာကွောငျ့ အခုအခြိနျမှာ မရရှိနိုငျတော့တာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ မှနျကနျတဲ့လူတှကေို နညျးနညျး မွနျမွနျနဲ့ ထကျထကျမွကျမွကျ မှနျမှနျကနျကနျ ရှေးခယျြရပါမယျ” လို့ ပွီးခဲ့သညျ့သောကွာနကေ့ ပွောကွားခဲ့ပွီး ယခုအခြိနျမှာတော့ မွနျမွနျဆနျဆနျပဲ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျနှဈယောကျခနျ့အပျနိုငျခဲ့ပါပွီ…။
နညျးပွသဈ Ralf Rangnick နဲ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျအသဈတှကေ အဘကျဘကျက လဲပွိုနတေဲ့ ယူနိုကျတကျကို ဘယျအ‌ခွအေနထေိ ဆှဲတငျပေးနိုငျမလဲ..? ဖာဂီတညျဆောကျခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျတဈခတျေကိုရော ပွနျလညျဆနျးသဈနိုငျမလားဆိုတာကတော့ ရငျခုနျစှာ စောငျ့ကွညျ့ကွပါစို့ GG Man United ပရိတျသတျကွီးရေ….
ကမ္ဘာ့အရေးကြီး အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြားအမြင်ဆရာမကြီး ဘာဘာဗန်ဂါရဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဟောကိန်းများ
Posted on 01/01/2022 01/01/2022 Author Admin
ကမ္ဘာ့အရေးကြီး အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြားအမြင်ဆရာမကြီး ဘာဘာဗန်ဂါရဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဟောကိန်းများ ဘာဘာဗန်ဂါ(၁၉၁၁-၁၉၉၆)ဆိုတဲ့ အကြားအမြင်ဆရာမဟာ ကမ္ဘာ့အရေးကြီး အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တာကြောင့် နာမည်ကျော်ပါတယ်။ သူမဟာ မုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့ ဒဏ်ကြောင့် အသက် ၁၂ အရွယ်မှာပဲ အမြင်အာရုံ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရ‌ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးကို ကြိုမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေတော့ ရရှိခဲ့သူလို့ဆိုရမှာပါ။ သူမရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် ဟောကိန်းများဟာလည်း တော်တောများများ မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အကြောင်းတွေ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ပြိုကွဲမည့်အကြောင်း၊ အရှေ့ဂျာမနီနှင့် အနောက်ဂျာမနီ ပူးပေါင်းသွားမည့်အကြောင်း၊ မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ သေဆုံးမည့်အကြောင်းတွေကို မှန်ကန်စွာ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဆူနာမီ ဖြစ်ပေါ်မည့်အကြောင်းတွေ၊ ၉/၁၁ ဖြစ်စဉ်‌အ‌ကြောင်း၊ ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပေါ်မည့် အ‌ကြောင်း၊ ၄၄ ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတဟာ လူမည်းဖြစ်မည့်အကြောင်း […]
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကို အနိုင်ယူဖို့ ယူနိုက်တက်မှာ လက်နက်အစုံအလင် ပြည့်စုံနေပြီလို့ ‌ပြော‌ကြားလိုက်တဲ့ သရဲနီဟောင်း ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့်မှာ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကို အနိုင်ယူဖို့ ယူနိုက်တက်မှာ လက်နက်အစုံအလင် ပြည့်စုံနေပြီလို့ ‌သရဲနီဟောင်း လူးဝစ်ဆာဟာက ယုံကြည်နေပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု F မှာ ၁၁မှတ်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး အုပ်စုပထမနေရာနဲ့ ဗိုလ်ဝင်ခံနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရလာဒ်တွေ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ ဘုရင်ကြီးရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အဆုံးအဖြတ်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တာပါ။ Ralf Rangnick ကို ရာသီကုန်အထိ ကလပ်၏ ယာယီနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီးကတည်းက သရဲနီတို့ဟာ ပုံစံကောင်းတွေပြပြီး ရလာဒ်ကောင်းတွေ ရယူနေတာပါ။ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပုံစံကောင်းရကာ တိုးတက်လာနေပြီး အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နှင့် […]
ယူနိုက်တက်ရဲ့ အနိုင်ဂိုးရှင် ဒယ်ဒီဖရက်ဒ်ရဲ့သွင်းဂိုးအပေါ် အိုးထရက်ဖို့ဒ်ရဲ့ ပွဲကြည့်စင်ပေါ်ကနေ အောင်ပွဲခံနေခဲ့တဲ့ ဖရက်ဒ်ရဲ့သားလေး (ဗီဒီယိုဖိုင်)
ယူနိုက်တက် အဝတ်လဲခန်းအတွင်းမှာ အသင်းသားတွေရဲ့ သရဲနီစိတ်ဓါတ်နဲ့ DNA တွေ ကို စိန်ခေါ်လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့ သရဲနီဘုရင်ကြီးနဲ့ သရဲနီစစ်သူကြီး